Otu esi etinye ihe nchọgharị Chromium Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi etinye ihe nchọgharị Debian 11 Chromium
September 27, 2021 August 27, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ihe nchọgharị Chromium na APT
Wepu ngwungwu APT Chromium Browser
Wụnye ihe nchọgharị Chromium (ụdị Kacha ọhụrụ) na Snap
Wepu ngwungwu Snap Chromium Browser
Mwepụta ihe nchọgharị Chromium
N'ime ntuziaka na-esonụ, ị ga-ama Otu esi etinye ihe nchọgharị Weebụ Chromium na Debian 11 Bullseye gị sistemụ nrụọrụ. Otu ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ maka ụdị kwụsiri ike nke ochie Debian 10, Buster.
Ụzọ akwadoro bụ ịwụnye Chromium Browser site na iji ebe nchekwa ndabere Debian maka nkwụsi ike na nchekwa, yabụ ịwụnye Chromium kwụ ọtọ.
N'ọnụ ọnụ Debian gị, mee iwu a ka ịwụnye ihe nchọgharị Chromium.
Nyochaa nrụnye ahụ site na ịlele ihe nrụpụta na ụdị:
Iji wepụ ihe njikwa ngwugwu Chromium Web Browser APT, pịnye iwu a.
Mara, nke a ga-ewepụ ngwa ngwa niile ngwungwu ndabere ndị ọzọ etinyere na mbụ site na nrụnye Chromium gị.
Enwere ike ịwụnye ihe nchọgharị Weebụ Chromium site na ngwungwu snap, nke na-akacha ọhụrụ karịa ngwugwu APT. Canonical na-ekesa ma na-echekwa Snaps, onye nwekwara ma mepụta nkesa Ubuntu na ngwanrọ nke, dịka ọtụtụ mara, bụ ndụdụ nke ngalaba nnwale Debian na ikekwe otu n'ime desktọpụ na nkesa na-ewu ewu ugbu a na Linux.
Mbụ, wụnye snapd na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị:
Mwepụta ihe atụ nwere ndabere gụnyere a ga-etinye:
Ọ bụrụ na ị na-etinye snap maka oge mbụ, a na-adụ ọdụ ka ịwụnye faịlụ ndị bụ isi ka ịzenarị okwu ndị na-emegiderịta onwe ha:
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye Chromium ihe nchọgharị weebụ:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ngwungwu snap Chromium ihe nchọgharị dị na ụdị 92.0.4515.159 vs. ụdị APT nke 90.0.4430.212. Dịka ị na-ahụ, ụdị Snap dị n'ihu ụdị nchekwa Debian nke ndabara.
Rịba ama, ngwugwu snap ga na-ebukarị ibu karịa ngwugwu APT maka otu mmemme, dị ka ihe niile dabere mkpa ka ebupu na ya. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmemme ga-enwe otu ihe ndabere, sistemụ nwere ọtụtụ snaps arụnyere ga-emebi ohere nchekwa na data enweghị isi. Agbanyeghị, snaps aghọwo ihe a ma ama n'ihi na ọ dị mfe ịwụnye ngwungwu kachasị ọhụrụ, yabụ na ọ bụ nhọrọ nkeonwe.
Iji wepụ ihe njikwa ngwungwu ihe nchọgharị weebụ Chromium, pịnye iwu a.
Na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịgba Chromium n'ụzọ ole na ole. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ Debian gị, ị nwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ chromium iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Chromium. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ imepee Chromium, ibe mbụ ya ga-ekele gị:
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ịwụnye ihe nchọgharị weebụ Chromium na Debian 11 Bullseye n'ụzọ abụọ dị iche iche wee wepụ ngwugwu ahụ ma ọ bụrụ na achọghịzi ya. Ihe nchọgharị Chromium bụ nhọrọ mepere emepe mara mma nke na-enye ohere nkesa Linux chọrọ sọftụwia mepere emepe ka ọ kwado ihe nchọgharị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Chrome. Ndị na-ekesa Linux nwekwara ike iji Chromium dị ka ihe nchọgharị weebụ ndabara n'ọnọdụ Firefox.
Categories Debian Tags Chromium Nchọgharị, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo
Otu esi etinye Jellyfin Media Server na Debian 11